အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ အေမာမ်ဇမန်း(အ.ဂျ) ဆိုင်ရာ
မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် ဒိုအာယေ နွတ်သ်ဗာ နှင့် တရားဓမ္မ ၊ photos
ဇနျနဝါရီ ၂၀, ၂၀၁၈ - ၁၀:၀၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် ဒိုအာယေ နွတ်သ်ဗာ ဖတ်ရွတ်နေသည့် ပုံရိပ်အချို့ နှင့် H.I အာဂါယေ နဇရီ မွန်ဖရေသ် ၏ တရား ဓမ္မ ဟောကြားနေ သည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကူဖာ မြို့ ရှိ မစ္စ်ဂျစ် ဒေ စဲဟ်လာ ၏ နှစ်သက်ဖွယ် မြင်ကွင်းအချို့ ၊ photos
ဇနျနဝါရီ ၁၅, ၂၀၁၈ - ၅:၄၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ကို စောင့်မျှော်နေသည့် ရှီအာ မိုအ်မင်များ အတွက် အရေးကြီးသည့် မစ်္စဂျစ် ဒေ စဲဟ်လာ ၏ နှစ်သက်ဖွယ် မြင်ကွင်းအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤမစ္စဂျစ်သည် အီရတ် နိုင်ငံ ကူဖာ မြို့တွင်တည်ရှိပါတယ်။
မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် ဒိုအာယေ သဝစူလ် ၊ photos
ဇနျနဝါရီ ၄, ၂၀၁၈ - ၁၂:၀၄ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် ဒိုအာယေ သဝစူလ် ဖတ်ရွတ်နေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇနျနဝါရီ ၄, ၂၀၁၈ - ၁၂:၀၃ နံနကျ
ရှဟီးဒ် ဆယက်ဒ် ဂျအ်ဖရ် အမီးရီ ဈာပနာ ၊ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် ၊ photos
ဒီဇငျဘာ ၁၃, ၂၀၁၇ - ၁၁:၄၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် မဂျီးဒ် အက်္စရီ ဂျန်မ်ကရန်နီ အတွက် မဂ်ျလစ် နှင့် ရှဟီးဒ် ဆယက်ဒ် ဂျအ်ဖရ် အမီးရီ ဈာပနာအခမ်းအနားကို မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ တပ်အတွက် ကတိ ကဝတ်ပြုပွဲ ၊ ဂျန်မ်ကရန် photos
နိုဝငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ယနေ့ ဂျန်မ်ကရန် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် တွင် ကွမ်းမြို့ ရှိ စစ်တပ်၊ရဲနှင့်ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပြီး အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ တပ်အတွက် ကတိ ကဝတ်ပြု ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
( စစ်ရေး ပဋိညာဉ် တရား ) ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ၊ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် ၊ photos
နိုဝငျဘာ ၂၄, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၃ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ယနေ့မနက် တွင် အီရန်တပ်မတော် ၊အီရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ ၊ဂျအ်မေ အသိုလ်မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) ၊ အီရန်ရုပ်မြင်သံကြား ၊ ဂျအ်မေအသွဇ်ဇဲဟ်ရဟ် (စ.အ) ၊ ကွမ်းမြို့ဝန် တို့၏ ကိုယ်စား လှယ်တော်များ ၊ လက်ထောက် အရာရှိများနှင့် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် ၏ တာဝန်ရှိ အကြီးအကဲများ တက်ရောက် ပြီး ( စစ်ရေး ပဋိညာဉ် တရား ) ခေါင်းစဉ်နှင့် မစ္စ်ဂျစ်္စဒ် ဂျန်မ်ကရန် ၏ ဆွေးနွေးခန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဥရောပ ၊ အမေရိက ၊ အာရှ တို့ မှ သုသေသီများ အား မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် တွေ့ရစဉ် ၊ photos
ဩဂုတျ ၂၄, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်း မြို့တော် ရှိ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် တွင် (၅) ကြိမ် မြောက် ကျင်းပမည့် (( ရှီအာ အကြောင်း သိစေရန်)) ညီလာခံ အတွက် ဥရောပတိုက် အမေရိကတိုက် အာရှ တိုက် ဆိုင်ရာ ၁၃ နိုင်ငံ မှ သုတေသီများ ကွမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှ မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် လေ့လာ မှုများ ကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။
အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) နှင့်ပတ်သက်သည့် အချို့ သိစရာများ
နိုဝငျဘာ ၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၂ ညနေ
အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) နှင့်ပတ်သက်သည့် အချို့ သိစရာများ တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ကို အချစ်ထားသူများ ၏ အားကျဖွယ် မြင်ကွင်း (၂) / photos
မေ ၂၂, ၂၀၁၆ - ၈:၅၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး နှင့် ကွမ်းမြို့ တွင်ယနေ့မနက် နီမေယေရှအ်ဗာန် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ္လာဟ် ဟို အလိုင်ဟေဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) ၏ နောက်ဆုံး ကိုယ်စားလှယ်တော် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ် ) ၏မွေးနေ့ ကို စည်းကား အားကျဖွယ် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းပြင် ကွမ်းမြို့ ရှိ ဟဇရသ်ဖွာသေမာ မအ်စူမာ ကွမ်း (အလိုင် ဟာစလာမ် ) ရောင်ဇာတော် မှ မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် အထိ သွားသည့် ၈ ကီလိုမီတာ ခန့် ရှည်သည့် လမ်းတလျှောက် အန်ဂျွန်မာန်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ ပေါင်းစုံမှ လာရောက်သူ မိုအ်မေနီ မိုအ်မေနသ်များ ကို အခမဲ့ လက်ဖက်ရည် နှင့် မုန့် များ၊ ဖျော်ရည် တို့ဖြင့် နှင့် ဧည့်ခံပေးခြင်း အခမဲ့ ဆံသပေးခြင်း ၊ အခမဲ့ ဖိနပ်များကို တိုက်ပေးခြင်း အခမဲ့ အကျောလျော့ နှိပ်ပေးခြင်း နှင့် အခြား အခန်းကဏ္ဍများ စွာ တို့ဖြင့် ကောင်းမူ ကုသိုလ်ယူခဲ့ကြသည့်ပုံရိပ်များကို အား ကျဖွယ်တွေ့မြင် နိုင်ပါ တယ်။
မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် နီမေယေရှအ်ဗာန် ည၏ မြင်ကွင်း / photos
မေ ၂၂, ၂၀၁၆ - ၈:၃၃ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ယခုနှစ် မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် နီမေယေရှအ်ဗာန် ည၏ မြင်ကွင်း ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။
အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ကို အချစ်ထားသူများ ၏ အားကျဖွယ် မြင်ကွင်း (၁) / photos
မေ ၂၂, ၂၀၁၆ - ၄:၅၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး နှင့် ကွမ်းမြို့ တွင် မနေ့ကနေ့ နှင့်ညတွင် နီမေယေရှအ်ဗာန် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ္လာဟ် ဟို အလိုင်ဟေဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) ၏ နောက်ဆုံး ကိုယ်စားလှယ်တော် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ် ) ၏မွေးနေ့ ကို စည်းကား အားကျဖွယ် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းးပြင် ကွမ်းမြို့ ရှိ ဟဇရသ်ဖွာသေမာ မအ်စူမာ ကွမ်း (အလိုင် ဟာစလာမ် ) ရောင်ဇာတော် မှ မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် အထိ သွားသည့် ၈ ကီလိုမီတာ ခန့် ရှည်သည့် လမ်းတလျှောက် အန်ဂျွန်မာန်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ ပေါင်းစုံမှ လာရောက်သူ မိုအ်မေနီ မိုအ်မေနသ်များ ကို အခမဲ့ နေ့လည်စာ ထမင်း၊ ညစာ ထမင်း၊ လက်ဖက်ရည် ၊ကိတ်မုန့် အခြားမုန့် များ၊ မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည် တို့ဖြင့် နှင့် ဧည့်ခံပေးခြင်း အခမဲ့ ဆံသပေးခြင်း ၊ အခမဲ့ ဖိနပ်များကို တိုက်ပေးခြင်း နှင့် အခြား အခန်းကဏ္ဍများ စွာ တို့ဖြင့် ကောင်းမူ ကုသိုလ်ယူခဲ့ကြသည့်ပုံရိပ်များကို အား ကျဖွယ်တွေ့မြင် နိုင်ပါ တယ်။
အေမာမ် (အ.ဂျ) ၏ ချစ်သူများ မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျမ်ကရန် ဖက်သို့ ခြေလျင်ထွက်
(၁၅) ရှအ်ဗာန် နေ့သည် အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏မွေးနေ့ မြတ် မင်္ဂလာနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သိန်းပေါင်းများစွာသော် အေမာမ် (အ.ဂျ) ၏ ချစ်သူများ အနေဖြင့် အီရန် နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ ရှိ မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျမ်ကရန် ဖက်သို့ ခြေလျင်ထွက်ပြီး အေမာမ် (အ.စ) ကိုချစ်ခင်ကြောင်း သက်သေပြနေကြတဲ့ ပုံရိပ် တစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျမ်ကရန်သို့ အီရန် နှင့် နိုင်ငံတကာ မှ လာရောက်သူမှာ ခန့်မှန်းခြေ ၃သန်းခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၄ - ၆:၄၅ နံနကျ
ဟဇရသ် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ရက်လေးဆယ်(၄၀) မနက်တိုင်တိုင် ၊ ဒိုအာယေ အဟတ်ဒ် ဖတ်ရွတ်ပြီး အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်တော်ထံ တွင် ဒိုအာ(ဆု) တောင်းဆိုမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ (အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ) ၏ ကာအေမ် (အ.ဂျ) ၏ အန်ဆွာ (အဖွဲ့ဝင်) စာရင်းဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍ အေမာမ်ဇမာန် (အ.ဂျ) မဖူးပွင့်တော်မည်အရင် ကွယ်လွန် သွားပါက အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်အနေဖြင့် ၎င်း(ရက်၄၀ မနက်တိုင်း ဖတ်ရွတ်သူ) အား လောကသို့ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လှည့်ပေးတော်မူမည်။ (ရှင်စေတော်မူ မည်) ဒိုအာ၏ စကားလုံးတိုင်း အတွက် ကောင်းမူကုသိုလ် အကျိုး စဝါးဗ် ၁၀၀၀ ဆီ ချီးမြှင့်တော် မူ ပေမည်။၎င်းအပြင် ၎င်းဖတ်ရွတ်သူ၏ ဂိုနာပေါင်း ၁၀၀၀ ကိုပယ်ဖျက်ပေးတော်မူမည်။ ဒိုအာ မှာ အောက် ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (အ.စ) အကြောင်း တစေတစောင်း
ဩဂုတျ ၂၃, ၂၀၁၄ - ၂:၃၁ နံနကျ
စာရှုသူချစ်ပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မည်မျှအထိအဖြေမှန်ကြောင်းသိရင် မိမိအသိပညာဖြင့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြည့်ပါ။ပြီးမှမိမိဖြေသည့်အဖြေကိုမှန်မမှန် ကို နောက် ဖော်ပြထားမည့် အဖြေမှန် များ နှင့်တိုက်ကြည့်စေလိုပါသည်။
မဲဟ်ဒဝီ်းယွန်းနေ အလ်မွတ်စ်တဖွာ (ဆွ) ၏ မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျမ်ကရန်ဖက် ခြေလျင်ဇေယာရသ် ပြုပွဲ ညီလာခံ
ဇှနျ ၁၃, ၂၀၁၄ - ၇:၅၅ နံနကျ
ဟဇရတ်သ် ဗကီးယသွလ္လာဟ်ဟေလ်အအ်ဇမ်း (အ.ဂျ ) ၏မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယနေ့ ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် မဲဟ်ဒဝီ်းယွန်းနေ အလ်မွတ်စ်တဖွာ (ဆွ) ၏ မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျမ်ကရန်ဖက် ခြေလျင်ဇေယာရသ် ပြုပွဲ ညီလာခံ ကိုကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။
အေမာမ်(အ.စ)၏ ပညာဆိုင်ရာ အမျိုးအစားများ
မိမိခေတ်ကာလ၏ အေမာမ်(အ.ဂျ) အကြောင်းမည်မျှအထိမိတ်ဆွေ သိကြောင်း စမ်းကြည့်ရအောင် …. မေးခွန်းများ (၁) ၏အဖြေများ
ဇနျနဝါရီ ၁၆, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
မိမိခေတ်ကာလ၏ အေမာမ်(အ.ဂျ) အကြောင်းမည်မျှအထိမိတ်ဆွေ သိကြောင်း စမ်းကြည့်ရအောင် …. မေးခွန်းများ (၁)
ဇနျနဝါရီ ၁၄, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့်များ)
ဒီဇငျဘာ ၁၇, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) အနေဖြင့် မိမိ၏ရှီအာများထံ မှဘာအလိုရှိပါသလားဆိုတာ သိပါရစေခင်ဗျား ?
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေမာမ်ဇမာန်(အ.ဂျ)သခင်သည် မြေပထ၀ီပေါ်ရှိ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအတွက် ငြိမ်းချမ်း ချမ်းမြေ့မှု
ဒီဇငျဘာ ၈, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့်များ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှီိအာများပေးဆပ် ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရား ရှိပါသလား?
ဒီဇငျဘာ ၇, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ အေမာမ်ဇန်(အ.ဂျ) မွေးနေ့ အချိန် အခါတွင် အီရန် နိုင်ငံသားမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတကာ မှ ဘာသာရေး ကျောင်းသားများ၏ မစ်ဂျစ်ဒ်
ဇှနျ ၂၆, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ယခုနှစ် (၂၀၁၃ ) အေမာမ်မေဇမန် (အ.စ) မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အချိန်အခါ တွင် သပ်ပယ် ဖွယ် ရူဖွယ်ကောင်းလှ သည့် မစ်ဂျစ်ဒ် ဒေ ဂျန်မ်ကရန် (2)
ဇှနျ ၂၄, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ယခုနှစ် (၂၀၁၃ ) အေမာမ်မေဇမန် (အ.စ) မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အချိန်အခါ တွင် သပ်ပယ် ဖွယ် ရူဖွယ်ကောင်းလှ သည့် မစ်ဂျစ်ဒ် ဒေ ဂျန်မ်ကရန် (1)
ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ အနီး ရှိ မစ်ဂျစ်ဒ် ဒေ ဂျန်မ်ကရန် သို့ ခြေလျင် လျောက် ဇေယာရတ် ပြုသူများ (၂၀၁၃ )
ကျမ်းမြတ်ကွရ်အာန်၏ အာယတ်များထဲမှ အေမာမ်မဲဟ်ဒီ(အ.ဂျ)
ဖဖေျောဝါရီ ၂၈, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ထောင်ပေါင်းများစွာသောရုရှလူမျိုးများမှရှအ်ဗန်လမြတ်၁၅ရက်ဂျရ်ှန်ကျင်းပ	အေမာမ်ဇမန်း(န)(အ.ဂျ)မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောရုရှလူမျိုးများမှ ရှအ်ဗန်လမြတ်၁၅ရက်ဂျရ်ှန်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ)၏ စလာမသ်သီ အတွက် ဒိုအာ
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ)၏ စလာမသ်သီ(အေးချမ်း၊ကျန်းမာ၊သာယာရေး ) အတွက် ဒိုအာ ဖြစ်ပါသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) သတင်းဌာန ၊အဗ်နာ
အကွာအဝေး ကို အလေးထားပြီး ဒိုအာ ယေ ကိုမိုင်းလ် ဖတ်ရွတ် ၊ ကွမ်း ။ ။ photos
ဇှနျ ၅, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၆ ညနေ
အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အကြောင်း အွန်းလိုင်းဆွေးနွေး မှု ပြုလုပ် ၊အင်္ဂလန် ။ ။ photos
ဇှနျ ၅, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၅ ညနေ